Horjooge muhiim u ahaa Al-shabaab oo lagu dilay gobolka Hiiraan
Hiiraan (SONNA)-Maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dagaal ka dhacay duleedka magaalada Baladweyne ay ku dileen Cabdi Aadan oo ahaa Horjoogaha Howlgalada Al-shabaab, kaasi oo ku lug lahaa falal lagu dhibaateeyey dad Soomaaliyeed.
Gudoomiye ku xigeenka dhinaca amiga iyo siyaasada ee maamulka gobolka Hiiraan Maxamed Ibraahim Cabdullahi ayaa SONNA u sheegay in horjoogahaasi lagu dilay dagaal ka dhacay duleedka Baladweyne, islamarkaan maleeshiyaadka Al-shabaab si gaar ah uu ugu qaabilsanaa dhinaca howlgalada.
Waxa uu tilmaamay in Horjooge Cabdi Aadan uu dhawaan duleedka magaalada Baladweyne ku gowracay nabadoon si weyn looga yaqaanay gobolka Hiiraan.
Horjooge Cabdi Aadan ayaa horey u geystay falal badan oo lagu dhibaateeyey dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan.
Ibraahim Maxamed Geedi